Breaking..प्रधानमन्त्रीले भने ‘जेसुकै गर मैले राजीनामा दिन्न, मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु हो’ - Rising Dainik
Breaking..प्रधानमन्त्रीले भने ‘जेसुकै गर मैले राजीनामा दिन्न, मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु हो’
November 4, 2020 November 4, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on Breaking..प्रधानमन्त्रीले भने ‘जेसुकै गर मैले राजीनामा दिन्न, मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु हो’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले आफु विरुद्ध भइरहेका गतिविधिका बारेमा कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । उनले कसैले विरोध गर्दैमा राजिनामा पनि नदिने स्पष्ट पारेका छन् । केही दिन यता सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि देखिन थालेका प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवनको उद्घाटन गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
सञ्चारमाध्यममा हल्ला फैलिएको छ राजीनामाका बारेमा तर मैले किन राजिनामा दिने ? प्रधानमन्त्री ओलीले भने मैले राजिनामा दिनु भनेको देशलाई बार्बादीतिर लान दिनु हो । उनले केही ब्यक्तिहरुमा जे कुराको पनि विरोध गर्ने शैली भएकाले त्यही गरिरहेको प्रतिकृया दिएका छन् ।
उनले यस्तो बेलामा आफुले राजिनामा दिनै नहुने बताएका छन् । जनताको बहुमतले प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै कसैले चाहदैमा राजिनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन् । देशलाई बर्बादीतिर जानवाट वचाउन पनि आफुले राजिनामा नदिने उनले बताएका छन् ।
बाहिर के भइरहेको छ भन्ने बारेमा आफुले चासो नराखेको र त्यसबारे थाहा पनि नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
“बाहिर तयारी गर्दैछन् भन्ने सुनेको छु के को तयारी हो ? तर त्यसले केही पनि हुने वाला छैन ।
मेरा करले होइन, जनताको आवश्यकता र समर्थनले म प्रधानमन्त्री भएको हो । उनले अस्थिरताको खेती गरिरहने आदत केहीमा भएकाले त्यसैको परिणाम भएको बताएका छन् । आफुले मुलुकमा स्थिरताका लागि काम गर्ने भएकाले त्यस्ताको पछि पनि नलाग्ने बताएका छन् ।
सलमान खानले उपचार खर्च बेहोरेका बलिउड अभिनेता फराज खानको मृ’त्यु
महाभारतकी द्रौपदीले पाँच पति कसरी पाइन् ?
‘कुनै कदम चालेको शंका मात्रै भयो भने त्योभन्दा कडा कदम चाल्छु र म जे पनि गर्छु’
November 2, 2020 Ramash Kunwar
प्रचण्डद्वारा नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पद परित्याग !
November 8, 2020 Ramash Kunwar
नेकपा फुट्यो भने प्रचण्डका कारण फु’ट्छ : मुख्यमन्त्री गुरुङ